5 Zvikonzero VaKristu Vese Vanofanirwa Kuparidza Evhangeri | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Kurarama nehumwari 5 Zvikonzero VaKristu Vese Vanofanirwa Kuparidza Evhangeri
Nhasi tichave tiri kubata nezvikonzero zvishanu maKristu ese achifanirwa kuparidza. Evhangeri haisi iyo nzira yayaimbove iri mune yekare. Machechi mazhinji anobata neshoko re budiriro kuti nzvimbo yebasa redu rekutanga sevatendi inosiyiwa isina kuitwa. Tinofanirwa kudzokera kunzvimbo yedu yepakutanga seChechi uye sevanyepi. Mharidzo yaKristu inoda kupararira kunzvimbo yakadzika uye yekupedzisira yenyika.
Bhuku ra Mateo 28: 19-20 Naizvozvo endai munoita vadzidzi kumarudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvinhu zvose zvandakakurayirai; zvino tarirai, ndinemwi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika. Iri raive basa guru rakapihwa naJesu paakanga ave kuda kukwira kudenga. Akataura kuti tinofanira kuenda munyika uye kuita vadzidzi vemarudzi ose, vanofanira kubhabhatidzwa muzita rababa, mwanakomana nemweya mutsvene. Iri raive basa guru rakapihwa naKristu Jesu.
Zvisinei, vatendi vazhinji nemachechi vakatsauka kubva pakutumwa uku. Mharidzo yebudiriro inodarika evhangeri. Evhangeri inofanira kutorwa sekutanga mumakereke edu. Chechi yega yega uye munhu mumwe nemumwe anofanira kuparidza mashoko akanaka nekusvika kuvanhu. Ruponeso haruna kuitirwa kuunganidzwa, runofanira kugoverwa kuyambuka. Kristu haana kuuya kuvanhu vakaponeswa, basa rake raive revasina kuponeswa.
Ndezvipi zvikonzero zveevhangeri zvinofanirwa kukosheswa mumachechi edu uye nemaKristu ese? Ngatikurumidze kusimudzira zvikonzero zvishanu izvo maKristu ese anofanira kuparidza.
Iwo murairo naKristu Jesu
Mateo 28: 19-20 Naizvozvo endai munoita vadzidzi kumarudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvinhu zvose zvandakakurayirai; zvino tarirai, ndinemwi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika.
Uku ndiko kutumwa kukuru kwakarairwa naKristu Jesu. Akaudza vaapositori nemunhu wese akaona kukwira kwake kudenga kuti simba rose kudenga nepasi rakapihwa kwaari, saka isu tinofanira kuenda kurudzi rwose uye kuita vadzidzi, tinofanira kuvabhabhatidza muzita rababa, mwanakomana nemweya mutsvene. . Uye tinofanira kuvadzidzisa kuchengeta zvese zvaakatiraira kuti tiite.
Basa raKristu raisagona kuve rakaitwa mumakore ake maviri muhushumiri, ndosaka Kristu akaraira avo vakagamuchira ruponeso kuti vaende kunze kwenyika vanoparadzira mashoko akanaka kune vamwe vanhu. Chimwe chikonzero chikuru nei tichifanira kuparidza nekuti yaive murairo watakapihwa naKristu Jesu. Kana zvasvika kuEvangelism, isu hatina sarudzo, zvinomanikidzwa, zvinosungirwa kumutendi wese.
Nekuda kwekufa kwaKristu
Chinyorwa mubhuku raJohane 3:16 Nokuti Mwari ida nyika kwazvo zvekuti wakapa Mwanakomana wake mumwechete akaberekwa kuti wese anotenda maari arege kufa asi ave nehupenyu husingaperi. Basa raKristu Jesu harisi revanhu vashoma kana vanhu vakati. Icho chinangwa chepasirese. Akafira munhu wese uye kufa kwake kwakavhura sungano itsva kurudzi rwevanhu.
Mukukosha, idzi nhau dzakanaka dzinofanira kuparadzirwa kunze kwenyika. Murume wese nemukadzi vanofanira kuziva nekunzwa nezvazvo. Misha yese, musha wese unofanira kuuya pakunzwisisa kuti Kristu ndiani uye vanofanirwa kupinza muchibvumirano chehupenyu husingaperi kuburikidza naJesu. Mwari havadi kufa kwemutadzi asi kutendeuka kuburikidza naKristu Jesu. Asi vanhu vanozoziva sei izvi, ivo vasingatomboziva Jesu. Izvi zvinotsanangura kuti nei evhangeri ichikosha kwazvo kwatiri sevatendi.
Nekuti Jesu ndiye nzira, chokwadi uye Chiedza
Johani 14: 6 Jesu akati kwaari, “Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri.
Zvisinei nemakore mangani atinopedza panyika, hupenyu hunopfuura hwakareba. Izvi zvinotsanangura chikonzero nei murume achifanira kuita zvese zvinotora kuti awane nzvimbo muparadhiso. Zvichakadaro, hapana chedu chemaitiro akanaka chinogona kutipa nzvimbo muumambo hwababa. Chinyorwa chakataura kuti Jesu ndiyo chete nzira inoenda kuna baba, hapana murume anoenda kuna baba kunze kwaKristu.
Chero ani anofanirwa kunge aine zita rake rakanyorwa mubhuku rehupenyu anofanira kubvuma kuti Kristu ndiye ishe nemuponesi. Ipapo ndipo chete apo munhu anogona kuona Mwari. Basa riri patiri sevatendi kuona kuti vamwe vanhu vanoziva chokwadi ichi kuti vagoponeswa zvakare.
Tinokura zvirinani muna Kristu kana tichiparidza evhangeri
Kana isu tichiparidza evhangeri sevatendi, tinokura zvakanyanya muna Kristu. Kunyanya patinoedza kuyedza kuratidza vamwe vanhu kuti Kristu ndiani, kunzwisiswa kuri nani uye zaruriro yatinowana nezvaKristu. Kukura kwedu sevaKristu kunoenderana nemweya yakawanda sei yatinoshandura kuenda kudenga. Tinowana nzwisiso yakadzama uye nzwisiso kubva kuna Mwari patinoenda kunoparidzira kune vamwe vanhu. Uye nekuti tiri kuita basa raMwari, baba vacho havangasiye bhizinesi redu risina kuitwa.
Nekuti tinoda vamwe sekurairwa kwaKristu
Mateo 22:36 Mudzidzisi, ndeupi mutemo mukuru pamurairo? Jesu akati kwaari: Ida Ishe Mwari wako, nemoyo wako wose, uye nemweya wako wose, uye nefungwa dzako dzose. Ndiwo murairo wekutanga uye mukuru.
Nekuti Kristu akatiraira kuti tide vavakidzani vedu sezvatinozviita. Tinofanira kuedza kuparidza evhangeri yaKristu kwavari nekuti tinoda kuti vaponeswe. Sezvo isu takagamuchira chipo chepachena cheruponeso, saizvozvo isuwo tinofanira kuchipa kune vamwe pachena. Kana isu takaponeswa, kune mweya yakawanda kwazvo inotarisa kwatiri kuti tiponeswe, hatigone kuvadzikisira. Tinofanira Kuparidza, tinofanira kuparadzira evhangeri.
Previous nyaya10 Bhaibheri Verse Iwe Haufanire Kanganwa Kana Uchinamatira Ruregerero
inotevera10 Ndima yeBhaibheri Haufanire Kukanganwa Paunenge Uchirwara
Zvikonzero zvishanu Unofanirwa Kurera Vana Vanotya
Nzira shanu dzekugadzirira Kuuya kwaJesu
Humbowo hweMagwaro hwekuti Mweya waMwari uri kukutungamira
20 Isimba Hapasina Kunonoka Kunonoka Mitezo yeMinyuko
Maitiro Ekukunda Dambudziko reMari SevaKristu
Minamato Yekunamatira Kwezvikomborero Zviviri
Zuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 12th 2018